ရသဆောင်းပါးစုံ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 94
ဓမ္မဘေရီအရှင်ဝီရိယ (တောင်စွန်း) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၂ “မှားရာက မှန်၊ မဲရာက ဖြူ၊ ဆိုးရာက ကောင်း’’ ဆိုတဲ့ အခြေအနေရောက်အောင် ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ တခါတည်း ခေါင်းနဲ့ပန်းလှန်သလို ပြောင်းပြီး လဲပစ်မလား၊ တဆင့်ချင်း...
ဇော်အောင် (မုံရွာ) မေ ၁၇၊ ၂၀၁၂ တိုင်းပြည်ကြီး၊ ပျက်စီးယိုယွင်းလာသည်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုသူများက ၁၉၈၆ ကွန်မြူနစ်ပါတီကွန်ကရက်ကြီးတွင် အစိုးရအဟောင်းကို အသစ်နှင့်အစားထိုးလိုက်သည်။ အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ်ရှိသော ငုရင်ဗင်လင့်ဆိုသူ ပါတီအကြီးအကဲဖြစ်လာပါသည်။ ထိုမှစပြီး အရှေ့တောင်...
ဖိုးထက် မေ ၁၆၊ ၂၀၁၂ ကျနော် ပေါက်စနအရွယ်က အိမ်မှာ ရေဒီယိုကြီးတစ်လုံးရှိသည်။ လိုင်းအားချိန်ညှိသောခလုတ်ကြီးတွေက ပြူးပြူးပြဲပြဲ။ လိုင်းချိန်ဖို့ ဇယား ကွက်တွေက ကြောင်ကြောင်ကြားကြား။ ဓာတ်ခဲအကြီးကြီးတွေက ခြောက်လုံးထည့်ရသည်။ အပြင်အဆင်က ဘယ်လိုမှ ခေတ်မမှီ။...
မောင်စွမ်းရည် မေ ၁၆၊ ၂၀၁၂ မိတ်ဆွေများ ခင်ဗျား …. ဒီတပတ် ကျနော်ပြောမှာကတော့ ဆရာကြီးသခင်ကိုယ်တော်မှိုင်းရဲ့ “ဒေါင်းဝါဒ” နဲ့ “ဒေါင်းအလံ” အကြောင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာကြီးဟာ “ဒေါင်းဋီကာ” ဆိုတဲ့ ကျမ်းတစောင်ပြုစုပြီး...
ဗုဒ္ဓ၀ါဒီရှုမြင်တဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတာ ဘိက္ခုဓမ္မပိယ (ယူအက်စ်အေ) မေ ၁၂၊ ၂၀၁၂ လွန်ခဲ့တဲ့သုံးပတ်ခန့်က “ဗုဒ္ဓ၀ါဒီနှင့် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်’’ အမည်နဲ့ ဆောင်ပါးတစ်ပုဒ်ရေးဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ နှစ် ပေါင်းရှစ်ဆယ်နီးပါး လျှောက်လှမ်းနေပြီးဖြစ်ပါလျှက် စည်းကမ်းပြည့်ဝတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ကြီးဆီသို့ မရောက်ရှိနိုင်သေးတဲ့...
ကံထွန်းသစ် မေ ၁၂၊ ၂၀၁၂ ဖုန်းမြည်လာ၍ နာရီကိုတချက်ကြည့်လိုက်တော့ ည (၁၁) နာရီထိုးလုလု၊ သည်အချိန်မှာဆက်လေ့ရှိသူသည် သူဟု သိလိုက်၏။ သူတာ ၀န်ပြီးချိန်နှင့် ကိုယ့်အားလပ်ခါချိန်၍ ဖုန်းဆက်လေ့ရှိသူမဟုတ်လား။ မန္တလေးမြို့၊ မိုးကောင်းတိုက်၊ ညောင်ရမ်းပါဠိတက္ကသိုလ်ရိပ်မှာ...
ဖိုးထက် မေ ၁၁၊ ၂၀၁၂ ဒီကမ္ဘာလောကကြီးပေါ်မှာ လူသားတွေ သုံးနှုန်းတဲ့ဘာသာစကားတွေထဲမှာ သင်ယူ၊ တတ်မြောက်ဖို့ အခက်ဆုံးဘာသာစကားတွေကို ပညာရှင်တွေ သုတေသနလုပ်ပြီးထုတ်ပြန်တာကို တလောက အင်တာနက်မှာ ဖတ်လိုက်ရတယ်။ အာရဗီဘာသာစကားက အခက်ဆုံးလို့ ပြောပါတယ်။ သူ့နောက်ကမှ...
Ashin Wirath – ကျောင်းထိုင်သာသနာပြုနည်း
ကျောင်းထိုင်သာသနာပြုနည်း အရှင်ဝီရသူ မေလ ၉၊ ၂၀၁၂ မျက်မှောက်ခေတ်သာသနာ၌ သာသနာပြု ရဟန်းတော်များ၏ သာသနာရေးဆောင်ရွက်ချက် တနည်းအားဖြင့် သာသနာပြုနည်းဗျူဟာ (၆) မျိုး ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့မှာ … (၁) တရားဟောသာသနာပြုနည်း (၂)...
ဖိုးထက် မေ ၇၊ ၂၀၁၂ ငယ်ငယ်က လူကြီးသူမတွေရှေ့ကနေ အချိုးမပြေ ဆရာလုပ်မိပြီဆိုရင် “ကိုင်း ဟုတ်ပါပြီကိုတတ်ပရယ်..ဟုတ်ပါပြီ” ဆိုပြီးပြောတာ ခံရဘူး ပါတယ်။ အလိုက်ကန်းဆိုးမသိ၊ ကိုယ့်ဘာသာ ဘယ်ရောက်လို့ရောက်နေမှန်းမသိ ပြောတာ၊ ဆိုတာတွေကို အတွေ့အကြုံရင့်...
ဇော်အောင် (မုံရွာ) မေ ၆၊ ၂၀၁၂ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ကိုင်သူများကို ချီးကျူးမိပါသည်။ ဒါလောက်တိုတောင်းတဲ့အချိန်အတွင်း တိုင်းပြည်အတွက် မျက်ရည်များ၊ စားစရာဖြစ်ရတဲ့ ခံစားချက်နဲ့ အတိတ်ကိုသင်ပုန်းချေပြီး၊ ၀ိသမ၊ စစ်အာဏာရှင်အများစုကို ဘေးထုတ်ပစ်နိုင်ခြင်းဟာ အံ့ဘွယ် ဖြစ်ပါသည်။...
ဖိုးထက် မေ ၅၊ ၂၀၁၂ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံသားများအကြားတွင် အခုတစ်လော အရမ်း Hot နေသည့် သတင်းရှိသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ လွှတ် တော် တက်ရေး၊ မတက်ရေးအတွက် အငြင်းပွားနေသော လေးစားလိုက်နာပါ့မည်နှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်...
ကံထွန်းသစ် မေ ၅၊ ၂၀၁၂ ငွေရောင်တိုယိုတာကိုရိုလာကားလေးသည် လစ်ဘာတီလမ်းတလျောက် အရှေ့မြောက်သို့ ဦးတည်ပြေးလျှက်ရှိသည်။ မောင်းနှင်သူက ဒေါက်တာအရှင်သြသဓ။ သူ့နံဘေးတွင်မူ ဝေဇယန္တာဆရာတော် ဦးဣန္ဒာစာရ။ “အိပ်ရေးဝရဲ့လား’’ ဟု ဒေါက်တာ သြသဓ လှည့်မေးချိန်မှာ တော့...
အညတရအကျဉ်းသားရဟန်းတော်များ (၁၈) – ဆရာတော်ဦးတိလောကာဘိဝံသ
အရှင်ပညာနန္ဒ မေ ၄၊ ၂၀၁၂ (၁) ၁၉၉၀ ခုနှစ်က မန္တလေးမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သမိုင်းဝင် ပတ္တနိကုဇနကံဆောင်ပွဲမှာ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေအများအပြား န၀ တ စစ်အစိုးရရဲ့ ဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ထောင်ချတာခံခဲ့ရပါတယ်။ မန္တလေးမှာဖြစ်ပွားတဲ့ ပတ္တနိကုဇနကံဆောင်မှုဟာ ၀ိနည်းတော်နဲ့အညီဖြစ်ပါ တယ် လို့...
ဦးမျိုး (ဥပဒေ) မေ ၃၊ ၂၀၁၂ ၁၈၈၅ ခုနှစ် သီပေါမင်းပါတော်မူသည်အထိ မြန်မာ့လယ်ယာမြေစနစ် သည် မြေရှင်ပဒေသရာဇ်စနစ် လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှုဖြစ် သည်။ အင်္ဂလိပ် ကိုလိုနီနယ်ချဲ့က မြန်မာ့မြေကို သိမ်းပိုက်လိုက်သည်နှင့် ချက်ခြင်းမြေရှင်ပဒေသရာဇ်လယ်ယာမြေစနစ် ပျောက်ကွယ်သွားသည်...
ဖိုးထက် ဧပြီ ၃၀၊ ၂၀၁၂ ကျနော်သည် အလွန် အပျင်းကြီးသော အကောင်ဖြစ်သည်။ ကျနော်ပျင်းသောကိစ္စများကို ချရေးပြရလျှင် စာမျက်နှာအများကြီး အလဟဿ ဖြစ်သွားနိုင်သဖြင့် အကျယ်မရှင်းလိုတော့။ ပျင်းသောအကြောင်းအရာတွေက အသက်အရွယ်အရ အပြောင်းအလဲ ရှိနိုင်သည်။ ငယ်ငယ်က...
Page 94 of 97«1...9293949596...97»